2017-11-08 | fukuokanepal.news | सूचना र मनोरंजन को संगालो बोकेको नेपाली समाचार साइट
2017-11-08	Leaveacomment 96 Views
पोखरा,२२,कार्तिक । अस्पताल प्रशासन र पीडित आफन्तबीच वार्ता नमिलेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीको रहोवरमा सहमति निकाल्ने कोसिस गरिएको थियो । ‘जिल्ला प्रशासनसँगको वार्तामा अस्पताल प्रशासनले हामीलाई मंगलबार बेलुका ५ बजेभित्र विकल्पसहित समस्या समाधान गर्ने बताएको थियो,’ आफन्त तिलकराज पौडेलले भने, ‘तर, अस्पताल प्रशासनका पदाधिकारी अस्पतालमै भेटिएनन् । यत्तिसम्म कि विज्ञप्ति बुझाउने व्यक्तिसमेत नभएपछि इमरजेन्सी कक्षको ढोकामै विज्ञप्ति टाँसेर फर्कियौं । बुधबार बिहान ...
उनी पिसाब पिउनुलाई थेरापीका रूपमा व्याख्या गर्छन् । यसले उनलाई निकै फाइदा पुगेको छ । ‘पिसाब पिउन सुरु गरेपछि मेरा कैयौँ रोग निको भएका छन्,’ उनको जवाफ छ । उनले आफू विगतमा दमको रोगी भएको र पिसाब पिउन सुरु गरेपछि धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुँदै गएको र अहिले ठीक भएको बताउँछन् । उनले दमका रोगीलाई आफ्नै पिसाब ९स्वमुत्र० पान गर्न सुझाब ...
2017-11-08	Leaveacomment 136 Views
पोखरा ,२२ कार्तिक । पोखराको पार्दी स्थित फिस्टेल एकेडेमी मा बि मा अतिरिक्त क्रियाकलाप अन्तर्गत खुल्ला कबिता प्रतियोगिता सम्पन्न भयो। प्रतियोगितामा प्रा. बि .तह अन्तर्गत समृद्धि तिमिल्सिना , सन्स्कृती चालिसे र कृपा थापा मगर, नि. मा .बि .तर्फ प्राप्ती लम्साल ,आकृती आचार्य र अमीत लम्साल मा .बि .तर्फ कन्चन रानाभाट ,कुशल खनाल र प्रिया के .सि .क्रमस प्रथम ,दित्तिय र तृतीय ...
2017-11-08	Leaveacomment 106 Views
हवाइजहाजमा यात्रा गर्दा यात्रुका झोलाको तौल नाप्नु त स्वभाविकै हो । तर के कहिल्यै यात्रुकै शरीरको तौल नापेको कसैले सुन्नुभएको छ ? सायद दुनियाँमा यस्तो कतै पनि हुँदैन । तर युरोपमा भने एउटा वायुसेवा कम्पनीले विमानमा चढाउनुअघि यात्रुको तौल नाप्न थालेपछि चर्चा कमाएको छ । फिनल्याण्डको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक फिनएयर नामक विमान कम्पनीले जहाजमा यात्रुहरुलाई चढाउनुअघि हरेक यात्रुको शरीरको तौल नाप्न ...
2017-11-08	Leaveacomment 109 Views
पहिरन, अब लाज ढाक्ने बस्त्र मात्र रहेन । जाडो वा गर्मीबाट बचाउने सुरक्षा कवच मात्र पनि होइन । बर्तमान समाजमा पहिरन मानिसको व्यक्तित्वसँग जोडिएको छ । त्यसैले पहिरन किन लगाउने भन्दा पनि कसरी लगाउने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण भएको छ । पहिरनको छनौटमा आफ्नो जिउडालको मात्र नापजाँच गरिदैन । जाडो, गर्मी, झरीमा लगाउने परिहनको आ-आफ्नै शैली छ । चाडपर्वमा वा औपचारिक ...
2017-11-08	Leaveacomment 209 Views
काठमाडौं, २२ कार्तिक । दुई किलो चरेससहित त्रिभुवन विमानस्थलबाट युक्रेनी नागरिक पक्राउ परेका छन् । प्रहरीको लागुऔषध नियन्त्रण व्यूरो कोटेश्वरबाट खटिएको टोलीले ४२ वर्षीय ओलेक्सी लोलेन्कोलाई पक्राउ गरेको हो । त्रिभुवन विमानस्थलमा जेट एयरवेजको ६५२ नं. को उडानमा मुम्बई हुँदै यूक्रेन जान लागेका ओलेक्सीको सुटकेश चेकजाँचका गर्दा दुई किलो चरेस भेटिएको थियो । ओलेक्सीले सुटकेश भित्रको स्टाइलिस्ट स्पोर्ट जुत्ता र ...
2017-11-08	Leaveacomment 111 Views
चर्चित गजल गायक थानेश्वर गौतमको स्वरमा रहेको ‘पिउने पनि रहर छ’ बोलको म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । श्याम रेग्मीको शब्दमा तयार भएको गीतमा गायक गौतम आफैको स्वर र संगीत सुन्न सकिन्छ । रोहित बस्नेतको कोरियोग्राफीमा नायिका नम्रता श्रेष्ठ र मोडल किरण गुरुङले गीतको भिडियोमा छमछम नाचेका छन् । पछिल्लो समय एकपछि अर्को हिट म्यूजिक भिडियो आफ्नो नाममा दर्ता गराइरहेका रोजल ...
2017-11-08	Leaveacomment 88 Views
ज्योतिष विज्ञानको अनुसार नवेम्बर ९ का दिन एकदम विशेष दिन रहने भएको छ । यो दिन यस वर्षको सबैभन्दा शुभ संयोग बन्न गईरहेको छ । बिहिबारको दिन दिउसो १ बजेर २४ मिनेटमा वर्षको सबैभन्दा उत्तम गुरु-पुष्य नक्षत्र लाग्दै छ । यस्तो संयोग २-३ वर्षमा एक पटक आउने गर्दछ । ज्योतिषशास्त्र अनुसार यस नक्षत्रमा सारा संकट हटेर जाने छ भने यो ...
2017-11-08	Leaveacomment 83 Views
२२, कार्तिक । विश्वमै सबैभन्दा बढी नाफा कमाएको कम्पनी एप्पलले अर्बौं डलर कर छली गरेको खुलासा भएको छ । एप्पलले कर छलिका लागि नयाँ गोप्य उपाय अपनाएको एक संस्थाले सार्वजनिक गरेको हो । प्याराडाइज पेपरले एललेख गरे अनुसार अमेरिकी कम्पनी एप्पलले सन् २०१३ मा कर छलीका लागि ट्याक्स हेवन अर्थात अफसोर कम्पनी रहेका देशमा लगानी गरेको थियो । एप्पलसँग ...
2017-11-08	Leaveacomment 75 Views
मोरङ, २२ कात्तिक । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य डा शिवमाया तुम्बाहाम्फेले दिगो सरकार र समृद्ध शहर बनाउने अभियानका लागि वामपन्थी गठबन्धनका उम्मेदवारलाई जिताउन आग्रह गर्नुभएको छ । मोरङको केराबारीमा मंगलबार क्षेत्र नं १ निर्वाचन परिचालन कमिटी (ख) को आयोजनामा भएको अगुवा कार्यकर्ता भेलामा बोल्दै तुम्बाहाम्फेले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको चुनावी तालमेल सफल बनाएर वाम एकताको पक्षमा ...